We Fight We Win. -- " More than Media ": 5000 Kyat News
5000 Kyat News
KIA ၊ တရုတ်ငွေတုဂိုဏ်းများနဲ့ သတ်ပုံမှားတဲ့ ငါးထောင်တန်
ယခုလဆန်းပိုင်းမှစတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လှည့်လည်သုံးစွဲနေသော (၅၀၀၀)တန်ငွေစက္ကူများကို အတုပြု လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းရှိ ငွေတုဂိုဏ်းများအကြောင်း ရေးသားထားမှုများ အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိစပ်လျက်ရှိတဲ့ နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာ တရုတ်အခြေစိုက် ငွေတုလုပ် ဒုစရိုက်သမားများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာ့ငွေစက္ကူအတုများကို ပြုလုပ်နေခြင်းသည် မြန်မာ့ငွေကြေးဈေးကွက်ကို တိုက်ရိုက်မထိခိုက်နိုင်သော်လည်း ပြည်သူလူထုအတွက် စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်စေသည့်အပြင် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် တစ်စတစ်စ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း မြင့်မားနေသည့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအတွက်လည်း နိုင်ငံတကာ၏ ဈေးကွက်ယုံကြည်မှုကို လျော့ကျစေပါသည်။
မြန်မာငွေစက္ကူအတုများ ပြုလုပ်နေမှု၏ နောက်ကွယ်တွင် မိမိပြည်တွင်းရှိ အစိုးရဆန့်ကျင်သည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုရှိနေမည်မှာ ယုံမှားသံသယဖြစ်ဖွယ် မရှိပေ။ ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှစတင်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်တွင် မြန်မာငွေစက္ကူများသည် တရုတ်နိုင်ငံ ရင်ကျန်း၊ ထိန်ချုံးဒေသမှ ဆဒုံး-ကန်ပိုက်တီး လမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုင်ဇာသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာငွေစက္ကူအတုများ ထုတ်လုပ်မှုတွင် KIA အဖွဲ့မှ အချို့ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့် တရားခံများတွင် KIA မှ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့ ၀င်အချို့ ပါဝင်ပတ်သက်လျက်ရှိကြောင်း တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးသတင်းများအရ သိရသည်။
ငွေတုဂိုဏ်းအဖွဲ့တွေ မသိလိုက်တဲ့အချက်ကတော့ ငွေစက္ကူ(၅၀၀၀)တန်အတုနှင့် အစစ်မှာ ကြီးမားသည့် အမှားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် မသိနိုင်ပေမယ့် (၅၀၀၀)တန်အတု ငွေစက္ကူများကို သေသေချာချာကြည့်ရုံဖြင့် အတုအစစ်ခွဲရလွယ်ကူပါသည်။ အကြောင်းကတော့ (၅၀၀၀)တန် ငွေစက္ကူအစစ်မှာ ``မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်´´ ဟု ရေးထားပြီး ငွေစက္ကူ(၅၀၀၀)တန် အတုတွင် ``မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုတဏ် ´´ ဟု ရေးသားရိုက်နှိပ်ထားပါသည်။ ``ဘဏ်´´ အစား ``တဏ်´´ဖြစ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
``ငွေစက္ကူအတုပြုလုပ်သူများအနေနှင့် KIA အဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့်ပေါင်းပြီး မြန်မာငွေစက္ကူများအပြင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ တရုတ်ယွမ်နှင့် ယူရိုငွေကြေးစသည့် ကမ္ဘာ့ငွေကြေးမျိုးစုံကို အတုပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ တရုတ် နိုင်ငံအတွင်း ကွင်းဆက်တရားခံများမှတစ်ဆင့် ယခုနှစ်ဧပြီလဆန်းပိုင်းတွင်လည်း မြန်မာငွေစက္ကူတု ပြုလုပ် သည့်စက်နှင့် ငွေပေါင်း ကုဋေ (၂၀)ကျော်ကိုလည်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း´´ တရုတ်အာဏာပိုင်များမှ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ငွေတုဂိုဏ်းများထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ငွေတုအများစုကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သော်လည်း ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်အတွင်း လှည့်လည်သုံးစွဲနေသော (၅၀၀၀)တန်များတွင် အတုများရှိနေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ယခု တရုတ်နိုင်ငံရှိ ငွေတုဒုစရိုက်ဂိုဏ်းများ ထုတ်လုပ်သည့် ငွေတုများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူး သော ကာလာပရင်တာနှင့် ထုတ်ထားသည့် ငွေစက္ကူအတုများထက် ပိုမိုသပ်ရပ်သေချာပြီး မျက်မြင်အနေ အထားဖြင့် ရုတ်တရက် အတုအစစ်ခွဲခြားနိုင်ရန်ခက်ခဲပါသည်။ ငွေစက္ကူ၏အသားမှာလည်း အတုတွင် ပြောင်ချောနေပြီး အရောင်မှာလည်း ပိုမိုတောက်ပလျက်ရှိပါသည်။
ထိုကြောင့် (၅၀၀၀)တန် သုံးစွဲသူ မိဘ ပြည်သူများအနေဖြင့် မျက်စိရှင်ရှင်ထားပြီး (၅၀၀၀)တန်၏မျက်နှာစာတွင်ရှိသော “ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ” စာလုံးအား သေချာစွာစိစစ်ပြီး သုံးစွဲသင့်ပါကြောင်း၊ ငွေစက္ကူ အတုနှင့် အစစ်ခွဲခြားပုံ အသေးစိတ်အချက် အလက်များအား နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွင်လည်း သတိပေးဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သဖြင့် သတိပြုသုံးစွဲရန် လိုအပ်ပါ ကြောင်း အသိပေးလိုက်ရပါသည်။
Zo Khup said...
All organisations should have atleast one machine each.
Let's publish trillions of Kyats.
Can you send me how to get that machine?